दि.रु.म नगरपालिकाः तिर्थ भर्सेस कुमार कस्को शक्ति कति ? - Hamrokhotang
Home खोटाङ समाचार दि.रु.म नगरपालिकाः तिर्थ भर्सेस कुमार कस्को शक्ति कति ?
दि.रु.म नगरपालिकाः तिर्थ भर्सेस कुमार कस्को शक्ति कति ?
२०७९ बैशाख १५, बिहीबार ०५:३९
खोटाङ । खोटाङको सदरमुकाम समेत रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा अब गठबन्धनका तर्फबाट प्रमुख (मेयर) मा कांग्रेस नेता तिर्थ भट्टराई र नेकपा एमालेका तर्फबाट कुमार आचार्यको भिडन्त नै निर्णायक देखिएको छ ।
कांग्रेसभित्रको उम्मेदवारी सम्बन्धी विवाद अन्त्य भएसँगै तिर्थ भर्सेस कुमारको निर्णायक भिडन्त हुने देखिएको हो । कांग्रेसका तर्फबाट मेयरमा तिर्थराज भट्टराई र धर्मराज पोखरेलको मनोनयन दर्ता भएपछि अन्योलता देखिएकोमा पोखरेल ‘ब्याक’ हटेका छन् ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीमा गत २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट दिप नारायण रिजाल विजयी बनेका थिए । उक्त निर्वाचनमा एमालेले करिब ५२ सय, कांग्रेस उम्मेदवारले ४८ सय र माओवादीका उम्मेदवारले ४४ सय मत प्राप्त गरेका थिए ।
यो निर्वाचनमा माओवादी र संघीय समाजवादीले मेयरमा उम्मेदवारी नदिएर कांग्रेसलाई सघाउनेछ ।
दुवै निष्ठावान उम्मेदवार
तिर्थ र कुमार फरक पार्टीका हुन् तर दुवै नेता स्वच्छ, इमान्दार, सालिन स्वभावका नेतामा गनिन्छन् । तिर्थलाई कांग्रेसका त्यागी इमान्दार नेता भन्ने गरिन्छ । कुमारलाई व्यापक जनसम्पर्क र लोकप्रिय एमालेका नेता भनेर चिन्ने गरिन्छ । कुमार दिक्तेलबासी हुन् भने तिर्थ दोर्पाबासी हुन् ।
भोट बैंकमा पकड
नगरपालिकाभित्र धेरै मतदाता भएको ठाउँमा दिक्तेल, सोल्मा, बुइपा, दोर्पा, नेर्पा, बुवालुङ, विजयखर्क आदिलाई लिने गरिन्छ । क्षेत्रीयताका कारण सोल्मामा कुमारको बाहुल्यता रहेको विश्लेषण गर्ने गरिएको पाइएको छ । उभोखोलामा पनि तिर्थ भन्दा कुमार पपुलर मान्ने गरिन्छ । दोर्पामा तिर्थको राम्रो रहेको छ ।
गत निर्वाचनमा एमालेले ६ वटा वडामा जित हासिल गरेको थियो । कांग्रेस र माओवादीले ३/३ वडा र संघीय समाजवादीले २ र राप्रपाले १ वडामा जित हासिल गरेको थियो ।
वडा १ दिक्तेलमा कांग्रेस, २ सोल्मामा एमाले, ३ बाम्राङमा राप्रपा, ४ खाल्डेमा एमाले, ५ लफ्याङमा संघीय समाजवादी, ६ नेर्पामा माओवादी, ७ दोर्पामा कांग्रेस, वडा ८ दोर्पामा एमाले, ९ निर्मलीडाँडामा एमाले, १० माथेकामा संघीय समाजवादी, ११ खार्मीमा कांग्रेस, १२ जालपामा माओवादी, १३ नुनथलामा माओवादी, १४ बुइपामा एमाले र वडा नम्बर १५ विजयखर्कमा पनि एमालेले जित हासिल गरेको थियो ।
कसका कस्ता चुनौती
अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले धेरै वडा जितेकाले पकड क्षेत्र चिर्न तिर्थलाई चुनौती देखिन्छ । तर, गठबन्धन दल एक भएकाले उक्त चुनौतीको पहाड कुमारका अगाडी ठरिएको छ ।
गठबन्धनको भोट एक ठाउँ जोड्ने हो भने तिर्थले सहजै जित्नेमा दुई मत छैन । तर, गठबन्धन गर्दैमा सबै भोट आउने निश्चित देखिदैन । अझ कांग्रेसभित्रको उम्मेदवारी विवादले पनि असर गर्ने देखिन्छ । भलै पोखरेलको उम्मेदवारी फिर्ता हुनुले कांग्रेसलाई राहत भने मिलेको छ । गठबन्धन भित्र प्रमुखमा रुख, दोस्रो हसिया हथौडा हुँदै कलम, छातामा भोट क्रस गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । उम्मेदवार नभएकाेमा पनि सबैको चुनाव चिह्न हुने तर भोट क्रस गराएर मतदान गर्नुपर्ने गठबन्धनका मतदातासामु बाध्यता देखिन्छ । उम्मेदवार बिनाकाे चुनाव चिह्नमा धेरै भाेट जाने सम्भावना छ । गठबन्धनले उक्त क्रस भोट गराउन सफलता हासिल गर्नु र नगर्नुमा पनि उसको जितको भविष्य अडिएको मान्न सकिन्छ ।
धेरै वटा चुनाव चिह्नमा क्रस गराउनु सक्नु गठबन्धनका लागि चुनौती छ भने एमालेले त्यसमा भोट चोर्न सक्ने पनि सम्भावना बढी छ । दिक्तेल एकमा कांग्रेसको पकड क्षेत्र हो, तर आचार्यहरुको बाहुल्यता भएको ठाउँमा बन्धुत्वको नाराले प्रभाव पार्ने सम्भावना बढी छ ।
गठबन्धनका उम्मेदवार भट्टराईले आफ्नो जित सहज भएको बताउने गरेका छन् । एमालेका उम्मेदवार कुमार पनि एमालेको राम्रो पकड क्षेत्र भएकाले आफूले जित्ने दाबी गर्छन् ।